Nzvimbo Yekutandarira Mabhuku Yakatangwa | Martech Zone
Yekutsikirira Mabhuku Akatangwa!
Svondo, June 25, 2006 Mugovera, Kukadzi 20, 2016 Douglas Karr
Mushure memavhiki mashoma ekusavata uye maawa akawanda, ini ndakaparura Resort Publications neshamwari yangu, Chris Baggott. Zano iri chimwe chinhu chaifungwa naChris asi ini ndakambotaurwa nezvazvo mune akawanda mablog angu. Musoro wenyaya uye wedunhu webhu kutema (blogging) inoramba ichisimudzira. Indaneti yakaita sekutarisa kunze muchadenga… imba yemamwe masayiti haina magumo uye inokura nekukurumidza uye nekukurumidza. Sezvo dandemutande rinoramba richikura, injini dzekutsvaga dzinofanira kuwedzera kuomarara uye nzvimbo dzinofanirwa kurwisa zvakanyanya uye kuomarara kuti zvionekwe.
Ini ndinotenda mhinduro kune izvi iri kutarisisa kutarisa kuburikidza nekuzvishambadza. Blogs ndiyo mhinduro kwayo kune izvi nekuti ivo vakasarudzika. Dimikira randinoramba ndichishandisa nevanhu nderekuti mutsauko pakati pekuisa chikwangwani pamberi pechitoro chako kana kubuda uchiti mhoro. Mazhinji mawebhusaiti anongova 'signage'. Ivo havatenderi vanhu kuti vaone vanhu kana iyo nyaya iri seri kwenzvimbo. Blogs dzinokutendera iwe kuti utaure kune vanhu uye uvabvumire kuti vataurezve.
Resort Publications inounza zvese izvi zvinhu pamwechete mune imwe saiti. Iyo yemusoro (Resorts). Ndedunhu (rakakamurwa nenyika nenzvimbo). Uye ndezvega… zvakanyorwa nevanhu vane nzvimbo yekutandarira kana nevanhu vakamboshanya ipapo. Isu tinoshuvira kuti mhedzisiro yacho inozivikanwa kwazvo yemahara saiti.
Tags: kuenderanaresort zvinyorwanzvimbo yekutandariravatsip
Tsumo uye Chigadzirwa Management